Ogaden News Agency (ONA) – Maaweeladii loo alifey Kt Meles oo ku soo afjarmaysa Australia
Maaweeladii loo alifey Kt Meles oo ku soo afjarmaysa Australia
Qofka been waa loo sheegi karaa inuu rumaystose isaga ayay ku xidhan tahay. Riwaayad waa loo alifi karaa inuu aqbalose isaga ayaa xor u ah. Meesha xukunka dimoqraadiga ah uu ku dadaalo inuu la socdo xaqiiqada dhabta ah ee jirta iyo sida uu shacabkiisa u fikirayo iyo talaabada ay xukuumadda qaaday sida loo ogolaaday ama diiday, waxaa la ogaaday inuu xukunka kali-taliska ah u jajaban yahay been in loo sheego oo lagu maaweeleeyo waxaan jirin hadii xaqiiqada dalkiisa ay ka horimanayso wuxuu jecelyahay inay dhagahiisa maqlaan. Arintaa waxay u sahashaa kuwa beenta iyo maaweelada ku nool inay ku soo hadhaan kali-taliyaha oo qofkii runta sheegaba ay dilaan ama ka qariyaan ifka si aanu kali-taliyaha u gaadhin dhawaaqiisa. Arintaas waxay soo dadajiya burburka dalka iyo baaba’a aqlibiyada shacabka.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa ka socday Ogadenya riwaayado la yaab leh oo maal iyo waqti badan la galiyay. Waxaa maaweelada loo alifay Kali-taliye Meles, waxaana alifayay saraakiisha iyo sirdoonka gumaysiga u fadhiya Jigjiga, waxaana jilayay oo iska kaashanayay saraakiisha Wayaanaha ee biisha hantida shacabka Ogadenya oo midkii laba sana joogaba ka noqda isagoo malaayiin birr wata, iyo Cabdi ubo iyo kooxdiisa oo u arka hadaanay riwaayadahaa wax ka dhigin inay ku waayayaan jagooyinka iyo boobka xaaraanta ah.
Riwaayada iyo beenta loo sheegay Dhiigyacab Meles Zinawi ee la doonayo inuusan maqlin waxaan middaa ahayn waa laba. Gudaha waan ka dhamaynay Ato Zinawi ciidnkii ONLF (nabad-diidkii) oo ma jiraan, dibadaha waan ka soo afjaraynaa oo inyaroo mintid ah ayaa ku hadhay kuwaasoo sanadka soo socda aan soo xareynayno. Marka gudaha la joogo waxyaabaha qofkii soo sheega aan dib-dambe loo arkaynin waxaa ka mid ah ciidan ONLF ah ayaan halkaa ku soo arkay. Waxaad tusaale ahaan uga qaadan kartaa arintan dhacday; Dagaalkii ay CWXO ku qabsadeen 3xdii xero ciidan ee gumaysiga uu ku lahaa Buladheri, markuu taliyaha Hawaarinta ka codsaday gurmad in lala soo gaadho isagoo leh ciidan xoogan oo jabhadii ah ayaa na dul fadhiya waa la xidhay, lamana garanayo inuu nool yahay iyadoo in la toogtay loo badinayo.
Riwaayadda dibadda looga alifay ee laga dhaadhiciyay dhiigyacab Meles Zinawi ee ahayd tii soo hoday waana miduu ku tagay Mareykanka iyo Koonfur Afrika. Wixii la ogaa ayaana ka qabsaday. Markuu ku noqday Adisababa waxaa la sheegayaa inuu nacalad iyo canaan dusha uga tuuray kuwii beenta u soo dhoodhoobay, kuwaasoo ku rogay Cabdi ubo iyo kooxdiisa wixii nacalad iyo canaan ku dhacday. Waxaa qasab lagaga dhigay inay si dagdag ah u soo aadaan meel ka mid ah caalamka oy soo shiriyaan dad un Somaali ah (way ogyihiin shacabka Ogadenya in aanay ogolaanaynin inay soo horfadhiistaan koox gumaysiga uu soo dirsaday), ka dibna soo sawiraan iyagoo sacabka tumaya oo lacag u ururinaya mashruuca lagu boobahayo hantida xawaalad-layda Somaliyeed iyo jeebka qurba-joogta.
Waxaa si hal-haleel ah loogu soo diray waddanka Australiya oy ku nool yihiin jaaliyad xoogan oo Ogadenya ka timid 6 qof oo saddex Tigree yihiin, uu la socdo dhiigyacabka loo yaqaano Cabdulaahi itoobiya oo ku magaacaban ku-xigeenka Cabdi ubo ahna madaxa Hawaarinta oo soo kaxaystay midkii Cabdi ubo u qori jiray go’aamada dadka birma gaydada ah lagu laayo dambiile M. Xaaji Cabdishakur iyo midkii beenta u soo sheegay kuwan, oo Cumar la yidhaahdo lana dhashay Ibrahim Dheere oo dagan dalka Australia, magaalada Perth.
Sidaad ku maqasheen codkii iyo filimkii looga duubay meeshii ugu horeysay ay soo caga dhigteen, waxay sheegeen inay u yimaadeen say ugu salaxaan goobta dhiigyacabka Ogadenya Cabdi ubo oo hurda la’aan ay ku dhacady ka dib wixii ka qabsaday KT Meles dalka Koonfur Afrika. Nasiibdaro waxaa ku soo afjarantay Australiya beentii iyo riwaayadihii loo dhigi lahaa kaligii taliye Meles, waxaana lagu soo waramayaa inuu hadda ku sugan yahay Cabdi ubo xaalad waalni (hysteric) ah.
Kooxdan oo dalka Australia ku soo galey si dhuumasha ah ileen waa dambiilayaal ogsoon dambiyada ay ka galeen shacabka ugu xareysan Ogadenyee, ayaa si qarsoodi ah la sheegayaa inay meel aan muuqanin kolba koox yar ugu yeedhanayaan iyagoo ka cabsanaya inay jaaliyadda ogaato. Booliska Australiya ayaa la sheegayaa inuu ka fiirsanayo siduu ka yeeli lahaa iyagoo meel aan la ogayn la dajiyay oo looga qariyay jaaliyadda Ogadenya kuwaasoo ku raad jooga.